Pringles: Dhammaantood waxay ku bilaabmeen Kukiyada, oo waxay u gudubtay Kursi Robotic ah - Nidaamka Nidaamka Baradhada
в Sheekada Guusha, Dib u warshadaynta
Si rasmi ah, Chips Pringles muddo dheer ayaa loogu yeeraa cookies, maaddaama maadada baradhada ku jirta ay hooseyso - kaliya 42%, inta soo hartay waa bur iyo istaarijin. Waad ku mahadsan tahay qaabkan isku dhafan, Procter & Gamble, oo lahaa astaanta illaa 2011, waxay ku guuleysatay inay ka fogaato bixinta canshuuraha la kordhiyay muddo dheer, aad ayey qaali u aheyd in la soo saaro jajabyo gudaha Boqortooyada Midowday
Sannadkii 1956-kii, Alexander Liepa oo ahaa shaqaale ka tirsan Procter & Gamble, oo ahaa farmashiiste xirfad ahaan, ayaa soo diyaariyey qaab lagu dubo jajabkan. Laakiin waxay ku qaadatay dhowr sano oo dheeri ah inuu dhammaystiro oo uu helo maalgashi, sidaa darteed Chips-ka baradhada cusub ee Pringle ma uusan ka soo muuqan suuqa Waqooyiga Ameerika illaa Oktoobar 1968.
Marka loo eego hal nooc, magaca ayaa ku yimid gebi ahaanba shil. Shaqaalaha Procter & Gamble ayaa madaxooda jabiyay iyagoo isku dayaya inay la yimaadaan. Qaar ka mid ah, iyaga oo dhex maraya galka, waxay arkeen magaca Pringle Drive, oo ku yaalay magaalada Cincinnati, Ohio. Waxaa jira sheeko kale - Chips-yada waxaa loogu magac daray Mark Pringle, oo 1937 soo jeediyay qaab cusub oo looga shaqeeyo baradhada. Si kastaba ha noqotee, magaca Pringles wuxuu runtii jeclaa maamulka shirkadda waana la oggolaaday.
Bishii Meey 2009, Maxkamadda Sare ee London waxay xukuntay in jajabku noqdo baradho, sidaa darteed Procter & Gamble waxay ahayd inay bixiyaan m 100m ($ 156m) oo canshuur ah oo lagu daray sannadihii la soo dhaafay markii chips-ka loo iibinayay cunno ahaan UK, iyo sidoo kale in la bixiyo mustaqbalka. Million 20 milyan sanadkii.
Sanadkii 1994, Boqortooyada Midowday (UK) waxay dhaqan galisay sharci dejinaya habraaca qaadista canshuuraha qiimaha lagu daray. Sida sharcigu qabo, wax canshuur ah lagama qaado inta badan cuntada dalka. Waxa kaliya ee ka reeban waa badeecooyinka laga sameeyay baradhada, oo ay ku jiraan shiilannada Faransiiska, jajabyada iyo waxyaabaha la midka ah. Muddo dhowr sano ah, Procter & Gamble wuxuu ku doodayay in Chips-kiisa ay ku jiraan baradhada aad u yar ee la cashuuro.
Sanadkii 2011, Procter & Gamble wuxuu go'aansaday inuu ka iibiyo xuquuqda astaanta Pringles shirkadda 'Diamond Foods Inc', taasoo ku qiimeysay $ 2,35 bilyan.Laakiin sababo aan la ogeyn awgood, heshiiskaas ma uusan dhicin. Si kastaba ha noqotee, 2012, Kellogg's, oo ah shirkad caan ah oo soo saarta cuntada Mareykanka, waxay ku iibsatay sumadda $ 2,7 bilyan.
2018, Kellogg iyo Fiyatnaamiis soo saaraha cunnada degdega ah Acecook waxay iska kaashadeen inay keenaan baasto deg deg ah suuqa, sidoo kale loo yaqaan Pringles, oo ay weheliso caanka Julius Pringle oo ku jira baakadka. Markii hore, baastada waxaa lagu iibin jiray oo kaliya Japan, ka dibna waxay ka muuqatay Mareykanka.
Bishii Febraayo 2020, Kellogg wuxuu iskaashi la yeeshay Gravitonus, oo ah qeyb ka mid ah WARP, si loogu soo bandhigo kursiga ciyaarta ee Quudiyaha. Waxay leedahay jijin jimicsi lagu dhisay, waxay kormeertaa dabeecadda gamer waxayna xogta u dirtaa codsi gaar ah. Iyaga oo ku saleysan, barnaamijka wuxuu xisaabiyaa laxanka ugu fiican ciyaarta milkiilaha. Intaas waxaa sii dheer, gacan robot ah ayaa lagu rakibay kursiga, taas oo keeneysa chips afkiisa ciyaaryahanka markuu gaajoodo.
Maanta Pringles waxaa lagu iibiyaa 140 dal oo adduunka ah. Iyo mid kasta oo ka mid ah, suuqleyda Kellogg ayaa sameeyay khad gaar ah oo ka mid ah noocyada noocyadan.
Tags: Pringleschips wax soo saarkachips
Diirka baradhada ayaa noqon doona wax cayriin oo loogu talagalay soo saarista Bacriminta
Top 5 Ganacsatada Belarusiyaanka ee go'aansaday inay ku darsadaan badeecada raashinka hantida hantidooda ugu weyn
Arrinta dayrta ee majaladda "Nidaamka baradhada"!